दाङको बाह्रकुनमा माघेसंक्रान्ति मेलामा चन्दा दाहालको यो नाच , ज्योतिलाई फलप नै पारिन (भिडियो) – पुरा पढ्नुहोस्……
दाङको बाह्रकुनमा माघेसंक्रान्ति मेलामा चन्दा दाहालको यो नाच , ज्योतिलाई फलप नै पारिन (भिडियो)
दाङको बाह्रकुने दहमा माघी प्रोग्राममा हजारौ दर्शकको अगाडि चन्दा दाहालले भल्गर नृत्य प्रस्तुत गरिन र दर्शकहरु उनको नग्न उपद्रोमा खुबै झुमे ।
ज्योति मगरको अर्धनग्न प्रस्तुतिलाई टक्कर दिने यी चन्दा दाहालको उत्ताउलो भल्गर नृत्य अहिले दाङ भरि चर्चामा छ । यो भन्दा अगाडी मोडेल क्षेत्रमा खासै नसुनिएको नाम ‘चन्दा दाहाल’ यतिबेला भने सामाजिक संजाल खुबै तताउन थालेको छ । लाग्छ अब छिट्टै हिट हुनेछ ।
उनको यस्तो नृत्य देख्ने सामाजिक संजालका स्रोताहरुले टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । केहि सकारात्मक टिप्पणी गर्ने स्रोता मध्ये एक जना उनका दर्शकले भन्छन ‘मैले चाहिँ चन्दालाई महान मोडेल माने । किनकि एत्रो जनमानसमा धुलो धुवा नै उड्ने गरि दर्शक श्रोताहरुलाइ रोमान्चक गराउनु भनेको कलाकारको महानता र आजको मानवताको माग रहेछ भन्ने कुरा बुझे। समय सग सगै समाज पनि परिवर्तन भएकै हो। धन्यवाद छ हट,,सुन्दरी र सेक्सी चंदा दाहाललाई । अझै सफलताको कामना छ’ भन्दै शुभकामना समेत दिएका छन्
बिरोध गर्नेहरुको घुइचो पनि त्यतिकै छ, एकजना दर्शकले लेखेका छन् ‘बस्त्र बिहिन अस्त्र नदेखाउन यार, असल समाज तिम्रो दुर्गन्धले बिरामी छ, त्यसै पनि यो शहरमा सिनो मासु बिक्छ, अर्धनग्न शरिरको काचो मासु नबेचन यार ।’ भन्दै तिखो प्रहार गरेका छन् ।
नांगिएर चर्चा कमाउने मोडेलहरु यसरि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई कसैले समयको माग भएको ठान्छन भने कसैले समय दुर्गन्धको शिकार भएको ठान्छन तर उनको व्यक्तिगत चाहाना र इच्छा सामु सबै बुझाईहरु फरक र फिक्का हुने भने निश्चित छ । स्रोत :-रंगपार्टीबाट
हेर्नुहोस उनको भिडियो !
Prevसुत्केरिको ज्यान बचाउने सेनाका नायक टंकबहादुर कट्वाल, उहालाई सलुट गर्नुनै पर्छ हेर्नुहोस (पुरा पढ्नुहोस ) ….
Nextफेरी जन्मियो नेपालमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी, हेर्नुस को को छन त यो नयाँ पार्टीमा ?
सालको पात, लालुमै र केसरीमा अहिलेसम्मकै खतरा डान्स, चर्चित लोक मोडल टिका जैसीको बब्बाल होली डान्स-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
राजु शाक्यपछि चर्चित स्ट्राइकर विमल घर्तीमगर च्यासल युथ क्लब जाने सम्भावना…..